Ch 7 Matthew – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaMateu / Ch 7 Matthew
7:1 "Regai kutonga, kuti murege kutongwawo.
7:2 Nokuti chero mutongo uchitonga, saizvozvo iwe kutongwa; uye chero nechiyero iwe kuyera kunze, saizvozvo kuyerwa kwamuri.
7:3 Uye unogona sei kuona banzurwa muziso rehama yako, uye kwete kuona bhodhi muziso rako?
7:4 Kana ungati sei kuhama yako, 'Rega ndibvise banzurwa muziso rako,'apo, tarira, puranga riri muziso rako?
7:5 batsavatsi, tanga wabvisa puranga kubva muziso rako, uye ipapo uchanyatsoona mabvisiro zvakakwana kubvisa banzurwa kubva muziso rehama yako.
7:6 Musapa zvinhu zvitsvene kumbwa, uye regai kukanda maparera enyu pamberi penguruve, zvimwe dzingaatsika netsoka dzadzo, ndokuzo, wekushanduka, vanogona kubvarura akakutsaurai.
7:7 Bvunza, uye muchapiwa kwamuri. tsvaka, uye muchawana. gogodza, uye rinofanira kuvhurwa kwamuri.
7:8 Nekuti wose unokumbira, anogamuchira; uye ani naani anoshandira, anowana; uye kuti ani anogogodza, muchazarurirwa.
7:9 Kana ndeupi munhu pakati penyu, ani, kana mwanakomana wake vakanga kumubvunza kuti chingwa, Aizopa iye ibwe;
7:10 kana dai aiva kumubvunza kuti hove, Aizopa kwaari nyoka?
7:11 saka, kana iwe, kunyange muri zvakaipa, muchiziva kupa zvipo zvakanaka vana venyu, zvikuru sei Baba venyu, vari kudenga, kupa zvinhu zvakanaka kune vaya vanovakumbira?
7:12 saka, zvinhu zvose zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, ita saizvozvo kwavari. Nekuti uyu ndiwo murairo nevaporofita.
7:13 Pindai nepagedhi rakamanikana. Nokuti suwo rakafara, rakafara nenzira, unoenda mukuparadzwa, uye vazhinji varipo vanopinda naro.
7:14 How rakamanikana, uye ruramisirai sei ndiyo nzira, iyo inotungamirira kuupenyu, uye vashomanana ndivo vanouwana!
7:15 Chenjererai vaprofita venhema, vanouya kwamuri vakapfeka matehwe emakwai, asi mukati vari mhumhi dzinoparadza.
7:16 Muchavaziva nezvibereko zvavo. Vanhu vanombotanha mazambiringa paminzwa, kana maonde parukato?
7:17 Naizvozvo, muti wose wakanaka unobereka chibereko chakanaka, uye zvakaipa muti unobereka zvibereko zvakaipa.
7:18 Muti wakanaka haugoni kubereka chibereko zvakaipa, uye muti wakaipa haisi kubereka zvibereko zvakanaka.
7:19 Muti wose usingabereki chibereko chakanaka unotemerwa pasi wokandwa mumoto.
7:20 saka, nezvibereko zvavo muchavaziva.
7:21 Havasi vose vanoti kwandiri, 'Ishe, tenzi,'Achapinda muumambo hwokudenga. Asi ani naani anoita kuda kwaBaba vangu, vari kudenga, ndiye achapinda muushe hwekumatenga.
7:22 Vazhinji vachati kwandiri nezuva iroro, 'Ishe, tenzi, hatina kuprofita muzita renyu, uye madhimoni muzita renyu, uye nokuita mabasa mazhinji esimba muzita renyu?'
7:23 Zvino ndichavaudza pachena kwavari: 'Handina kumbobvira ndakuzivai. Ibvai kwandiri, imi vaiti vezvakaipa. '
7:24 saka, munhu wose anonzwa mashoko angu aya, uye akaaita anofanira kuenzaniswa wakachenjera, wakavaka imba yake paruware.
7:25 Mvura yakanaya, uye nzizi vakasimuka, uye mhepo ikavhuvhuta, vakamhanyira imba iyoyo, asi haina kuputsika, nekuti yakange yakateyiwa paruware.
7:26 Uye munhu wose anonzwa mashoko angu aya, uye akasaaita vachafanana nebenzi, wakavaka imba yake pajecha.
7:27 Mvura yakanaya, uye nzizi vakasimuka, uye mhepo ikavhuvhuta, vakamhanyira imba iyoyo, ikawira, uye akanga kukuru kuparadzwa kwayo. "
7:28 Zvino, when Jesus had completed these words, that the crowds were astonished at his doctrine.
7:29 Nokuti akanga achivadzidzisa somunhu ane simba, and not like their scribes and Pharisees.